5 Su'aalood oo Aad Weydiiso La-Taliyaha Kireynta Mashiinka Raadintaada | Martech Zone
Sabti, Febraayo 18, 2017 Sabti, Febraayo 18, 2017 Douglas Karr
Macaamiil aan soo saarnay istiraatiijiyad sanadeedka infographic waayo wuxuu ku sugnaa xafiiskayaga toddobaadkan. Sida ganacsiyo badan, waxay soo mareen khariidadda shaashadda ee haysashada la-taliye SEO xun waxayna hadda kiraysteen shirkad cusub oo la-talin ah oo SEO ah si ay uga caawiso hagaajinta dhaawaca.
Waxaana jiray waxyeelo. Udub dhexaad u ah istiraatiijiyadda xun ee SEO ayaa dib ugu xirmay tiro badan oo goobo khatar ah. Hadda macmiilku wuxuu la xiriirayaa mid kasta oo ka mid ah bogaggaas si uu uga saaro xiriiriyeyaasha, ama uga diido iyaga oo adeegsanaya Google Search Console. Marka laga eego dhinaca ganacsiga, tani waa xaaladaha ugu xun. Macmiilku wuxuu ku qasbanaaday inuu bixiyo la taliyayaasha labadaba isla markaasna, lumiyay qiimeynta iyo ganacsiga la xiriira. Dakhligaas lumay wuxuu u haray tartamayaashooda.
Waa maxay sababta ay u halgamayaan warshadaha SEO
Algorithms-ka Google wuxuu sii wadaa inuu ku sii kordho qaab casriyeysan awooddooda ah inay bartilmaameedsadaan oo ay shakhsiyeeyaan natiijooyinka ku saleysan aaladda, goobta, iyo dhaqanka isticmaalaha Nasiib darrose, la-taliyeyaal badan oo SEO ah iyo shirkado ayaa si weyn u maal-galiyay geedi-socod dhowr sano ka hor ah oo aan hadda khusayn. Waxay dhisteen shaqaale, waxay maalgeliyeen qalab, waxayna iskood wax u barteen xeelado aan duugoobayn oo keliya laakiin macaamiisha khatar gelin doona haddii maanta la isticmaalo.
Waxaa jira tiro hubris ah oo ku jira warshadaha SEO. Way igu adag tahay inaan aamino in lataliyayaal kooban, ama goob raadinta la jecel yahay, ama xitaa hay'ad dhan ay awood u leedahay inay ka baxdo balaayiin doollar oo Google ay maal-geliso si joogto ah u hagaajinta algorithms-keeda.
Waxaa jira seddex fure oo kaliya SEO casriga ah
Maqaalkani wuxuu ka careysiin karaa qaar ka mid ah dadka ku jira warshad aan ku dadaalno inaan hoggaaminno, laakiin waxba igama gelin. Waan ka daalay aragtida macaamiisha waa inay soo qaadaan qaybaha oo ay ku bixiyaan lacagta ay u baahan yihiin si ay uga noqdaan istiraatiijiyad dabiici ah oo si liidata loo fuliyay. Waxaa jira seddex fure oo kaliya oo ah istiraatiijiyad sare oo SEO ah:
Jooji Dayacaada Talada Mashiinka Raadinta - Mashiin kasta oo raadin ah wuxuu noo siiyaa ilo aan caadi aheyn si aan u hubino inaanan ku xadgudbin shuruudaha adeegsiga iyo raacitaanka dhaqankooda ugu fiican. Xaqiiqdii, mararka qaarkood taladaasi waa mid aan caddayn oo inta badan ka tagta daldaloollo - laakiin taasi micnaheedu maahan in la-taliye SEO uu riixo xuduudaha. Ha yeelin. Waxyaabaha maanta shaqeynaya ee ka soo horjeedda taladooda ayaa si fiican u aasi kara degel usbuuca soo socda maaddaama algorithm uu helayo daboolka oo ciqaabayo isticmaalkiisa.
Jooji Ku-Fiirinta Makiinadaha Raadinta oo Bilow Ku-Fiirinta Isticmaalayaasha Mashiinka Raadinta - Haddii aad horumarinaysid istiraatiijiyad kasta oo aan lahayn habka macaamiisha-marka hore, naftaada ayaa waxyeello u geysaneysaa. Mashiinnada raadinta ayaa si aad ah u doonaya khibrad weyn oo loogu talagalay dadka isticmaala mashiinka raadinta. Taas macnaheedu maahan inaysan jirin waxyaabo farsamo oo raadinta ah oo kaa caawinaya inaad la xiriirto makiinadaha wax raadinta iyo inaad ka hesho jawaab celin iyaga ka timid the laakiin ujeedadu marwalba waa in la hagaajiyo waayo-aragnimada isticmaale, maahan ciyaarta mashiinka raadinta.
Soo-saar, Soo-bandhig, iyo Kor-u-qaadista Mawduucyada cajiibka ah - Tagay waa maalmihii wax soo saarka si ay u feed Cunto xumida Google. Shirkad kastaa waxay kor u qaadday oo dardargelisay khadka isku imaatinka ee waxyaabaha cakiran si ay isugu daydo inay ku lug yeelato iskudhaf ereyo badan. Shirkadahaani waxay iska indha tireen tartanka waxayna iska indha tireen habdhaqanka martidooda halista ay ku jiraan. Haddii aad rabto inaad ku guuleysato darajada, waa inaad ku guuleysataa inaad soo saartid waxyaabaha ugu fiican ee mawduuc kasta ah, ku soo bandhigid qaab sifiican loo habeeyay, loona dhiirrigeliyo si loo hubiyo inay gaadho dhagaystayaasha la wadaagi doona - ugu dambaynna sii kordhaya darajadiisa on matoorada raadinta.
Maxay Tahay Su'aalaha Aad Weydiiso La-Taliyahaaga SEO?
Iyadoo tan oo dhan maskaxda lagu hayo, waa inaad awood u leedahay inaad soo koobto su'aalaha aad weydiiso la-taliyahaaga SEO si aad u hubiso inay u qalmaan oo ay ka shaqeynayaan danaha shirkaddaada. La-taliyahaaga hagaajinta mashiinka raadinta waa inuu ka shaqeynayaa inuu hubiyo inaad haysato kaabayaal aad u fiican, fahamka helitaankaaga, kobcinta, iyo istiraatiijiyadda haynta, iyo inuu kula shaqeeyo intaad ku jirto dadaalkaaga omni-channel si aad u kordhiso waxtarka ku habboon ee mashiinnada raadinta.
Ma rabtaa diiwaangeliso dadaal kasta waxaad codsaneysaa dadaalkeena raadinta si faahfaahsan - oo ay ku jiraan taariikhda, waxqabadka, qalabka, iyo yoolalka dadaalka? La-taliyayaasha SEO ee qabta shaqo weyn waxay jecel yihiin inay waxbartaan macaamiishooda dadaal kasta. Waxay ogyihiin in aaladuhu aysan fure u aheyn, waa aqoontooda makiinadaha baaritaanka ee uu macmiilku bixinayo. Qalab sida Search Console Search waa muhiim - laakiin istaraatiijiyadda la galiyay xogta waa waxa muhiimka ah. La-taliye SEO oo hufan ayaa ah la-taliye weyn oo SEO ah, halkaas oo aad si buuxda ugu hawlan tahay dadaalka.
Sidee ku go'aamisaa halkaas oo dadaalkeena SEO waa in la dalbadaa? Tani waa su’aal ay tahay inay su’aal ka dhalato. La-taliyahaaga SEO waa inuu si aad ah u xiiseeyaa ganacsigaaga, warshadahaaga, tartankaaga, iyo kala duwanaantaada. La-taliye SEO ah oo taga oo soo saaraya liistada ereyada muhiimka ah ayaa kormeeraya darajadooda, adiguna ma waxaad ku riixaysaa waxyaabaha iyaga ku saabsan adigoon fahmin meheraddaadu inay tahay mid cabsi leh. Waxaan ku bilaabaynaa hawlgal kasta oo SEO ah fahamka sida aan ula jaanqaadno istiraatiijiyadda guud ee omni-channel. Waxaan dooneynaa inaan ogaanno dhinac kasta oo ganacsigooda ah si aan u hubino inaan sameyneyno istiraatiijiyad gaar ah oo kaxeysa natiijooyinka shirkaddu u baahan tahay, ee ma ahan waxa aan qabaa laga yaabaa inay u baahdaan.
Ma qeexi kartaa dhinaca farsamada ee dadaalkaaga iyo maxaad naga caawinaysaa inaanu dhaqan-galino farsamo ahaan? Waxaa jira xoogaa dadaallo aasaasi ah oo lagama maarmaan u ah in lagu soo bandhigo waxyaabahaaga mashiinnada raadinta - oo ay ku jiraan robots.txt, khariidadaha bogga, kala sareynta goobta, dib u habeynta, dhismaha HTML, bogagga moobiilka la dardargeliyay, googoynta hodanka ah, iwm. ka jawaab celinta aaladda caawin doonta - kaliya ma ahan kaliya raadinta laakiin isdhexgalka isticmaalaha.
Sidee ayaad cabir guusha SEO-gaaga dadaal? Haddii la-taliyahaaga SEO uu sheego in taraafikada dabiiciga ah iyo qiimeynta ereyada muhiimka ahi ay yihiin sida ay u cabiraan, waxaa laga yaabaa inaad dhibaato haysato. La-taliyahaaga SEO waa inuu ku cabbiraa guushaada inta ganacsi ee aad ku soo saarto taraafikada dabiiciga ah. Muddada. Lahaanshaha darajo weyn oo aan lahayn koror la qiyaasi karo ee natiijooyinka ganacsiga ayaa dhammaantood ah wax aan waxba tarayn. Dabcan, haddii hadafkaagu ahaa darajo… waxaad ubaahnaan kartaa inaad ka fikirto naftaada.
Ma leedahay a dammaanad lacageed? La-taliye SEO ah ma xakamayn karo dhinac kasta oo ka mid ah istiraatiijiyaddaada suuq-geynta guud ahaan. La-taliyaha SEO wuxuu sameyn karaa wax walba oo sax ah, walina waad ka dambeyn kartaa tartamayaasha leh hanti badan, dhagaystayaal badan, iyo suuqgeyn guud oo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad lumiso mug weyn oo ka mid ah taraafikadaada raadinta iyo darajeyntaada maxaa yeelay waxay kugu riixeen istiraatiijiyad cabsi leh, waa inay diyaar u yihiin inay soo celiyaan qayb ka mid ah dadaalkooda. Oo hadday kugu ciqaabaan mashiin raadin ficilladooda, waa inay diyaar u yihiin inay soo celiyaan maalgashigaaga. Waxaad u baahan doontaa
Marka la soo koobo, waa inaad ka shakisan tahay la-taliye kasta oo SEO ah oo aan dantaada ugu fiican ka jirin, oo aan lahayn aqoon guud oo suuq-geyn ah, oo aan daah-furnaan ka ahayn dadaallada ay geynayaan. La-taliyahaagu waa inuu si joogto ah wax kuu baraa; waa inaadan la yaabin waxa ay sameynayaan ama sababta natiijooyinkaaga dabiiciga ay isu beddelayaan markay sameynayaan.
Markaad Shaki ku jirto
Waxaan la shaqeynay shirkad weyn oo aan ka yarayn toban la taliyeyaal SEO ah oo kala duwan oo la shaqeeya. Dhamaadka hawlgalka, waxaa jiray laba naga mid ah. Waxaan labadeenaba kula talinay inta badan lataliyeyaasha lahaa macmiilka ciyaaraha nidaamka - oo markii dubbahii dhacay (oo si adag u dhacday) - waxaan u joognay inaan nadiifino qaska.
La-taliyahaada SEO waa inuu soo dhaweynayaa fikrad labaad oo ka timaadda asaagga warshadaha. Xitaa waxaan sameynay baaritaanno taxaddar leh oo loogu talagalay shirkadaha waaweyn si loo xisaabiyo loona aqoonsado in la-taliyayaashooda SEO ay adeegsanayeen farsamooyinka madow. Nasiib darrose, hawl kasta oo ay ahaayeen waxay ahaayeen. Haddii aad ka shakido, waxaad u malayn kartaa inaad dhibaato ku jirto.
Tags: blackhat seoblackhat seo strategyorganicMashiinka raadintaistaraatiijiyada mashiinka raadintaSEOsi taxaddar lehbaadhitaan
Miyey Warbaahinta Bulshadu Ku khasbaysaa Suuqleyda Masaajid Ka Fog?
Emmerey Rose (@Emmerey)
Febraayo 21, 2017 saacadu markay tahay 11: 13 AM
Haye Douglas! Tilmaamo fiican! Waxaan si gaar ah u jecelahay markii aad dhahday "Jooji U-habeynta Qalabka Mashiinka Raadinta iyo Bilawga Wax-u-Qabashada Isticmaalayaasha Qalabka Raadinta". Waxaad si fudud uun ugu qodbay qeexitaanka sida SEO u shaqeeyo maanta. Waxaan la yaabay inkasta oo, miyaad kugula talinaysaa ganacsiyada yaryar inay kireystaan ​​la-taliye SEO ama shirkad?